Handeha sa Hijanona, Safidy Mametraka an’ireo Siriana Ao Al-Waer Manoloana ny Hoavy Tsy Azo Antoka · Global Voices teny Malagasy
Handeha sa Hijanona, Safidy Mametraka an'ireo Siriana Ao Al-Waer Manoloana ny Hoavy Tsy Azo Antoka
Voadika ny 15 Jona 2017 13:10 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Italiano, Español, 日本語, Ελληνικά, English
Zazakely iray mitàna fehezamboninkazo eo am-baravarankelin'ny iray amin'ireo fiarabe fitaterana ampiasaina hamindràna ireo mponina tao Al-Waer. Kianja Madinat al-Maared, Al-Waer, Homs. Sary nopihana tamin'ny 27 Martsa 2017. Loharano: Maher Al-Khaled/SyriaUntold.
Ity dia lahatsoratra iray nosoratana ho an'ny Siria tsy Voalaza - SyriaUntold avy amin'i Jood Mahbani, mpanao gazety mipetraka ao Homs no sady sivily mpikatroka, ary nadikan'i Yaaser Azzayyaat. Ny 8 May 2017 ity no nivoaka voalohany ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fiarahana miasa. Vakio eto ambany ny fizaràna voalohany.
“Idlib, Jarablus, na faritra ambanivohitra any avaratr'i Homs ?”
Izany no fanontaniana matetika ifanakalozan'ireo mponina ao amin'ny tanàna siriana ao Al-Waer, any andrefan'ny tanànan'i Homs ary ampahany amin'ny fari-piadidiana mitondra io anarana io ihany, rehefa mamotopototra momba izay ho toerana hitodian-dry zareo. Miala ny tanàna farany namahàrany ireo mpihoko sy ny fianakaviany, tanàna nomena anarana hoe ““ilay renivohitry ny revolisiona”, taorian'ny fifanarahana iray noelanelanin'i Rosia.
Taorian'ny taona enina nisian'ny ady izay nanomboka tamin'ny fitroaran'ny vahoaka nanohitra ny fitondràna Assad, ity farany dia an-dàlan'ny fiverenany haka indray ny fifehezana miaraka amin'ny fanohanan'i Rosia sy Iràna.
Ao anatin'ilay fifanarahana, voasonia tamin'ny 13 Martsa 2017 teo amin'ireo iraky ny fitondràna sy ny Kaomitim-bohitra tao Al-Waer, dia hanao andiany ny fifindràmonina, mandra-pialan'ny olona farany indrindra maniry handao ilay tanàna, fotoana izay hamindràna io tanàna io ho ambany fifehezan'ny tafi-panjakàna siriana.
Noho ny tsy fisian'ny antoka mivaingana, marobe ireo mponina no nisafidy ny handao ny tanàna sy hisedra ny “tsy fantatra”, toy izay hiandry ny tsy “tsy azo ihodivirana”, araka ny lazain'i Ibtisam Al-Masri, reny niteraka efatra. (Novàna daholo ny anaran'izy rehetra, ho fiarovana azy ireo.)
Ny ao an-tsainy dia raha tsara indrindra, ho toy izay misy ao Alep Atsinanana no hiandry ilay tanàna. “Horobain-dry zareo ny zavatra rehetra”, hoy izy alohan'ny hiakarana tao anatin'ilay fiarabe hitondra ireo andiany fahadimy amin'ireo handeha sesitany any amin'ny tanànan'i Jarablus. “Hamaly faty amin'ireo rehetra hijanona ry zareo, izany no antony andehanako… tsy ho vitako ny hijanona sy hijery azy ireo hamono anay sady handroba ny tranonay”.
Tsipihan'ireo haino aman-jery mpanohitra fa ny faritany Homs dia ambivitry ny fiovàna tanteraka amin'ny lafiny demografia efa nomanin'ny fitondràna siriana, toy izay mitranga any amin'ireo tanàna toa an'i Daraya, Al-Qusayr sy Alep-Atsinanana, izay samy natao fahirano teo aloha ary nilaozana no niafaràny.
Na izany aza, manjavozavo sy mifamahofaho ihany ny toedraharaha ao Al-Waer, ary tsy mbola fantatra raha tadiavin'ny fitondràna hatao foana tanteraka tsy misy mponina ilay toerana alohan'ny hanaparitahany ny tafika any.
Ilay fifanarahana hialàna an'i Al-Waer dia manana ny mampiavaka azy manokana, amin'ny fanokafana làlana hahafahan'ireo olontsotra tompontany miditra [ao an-tanàna] alohan'ny hitsofohan'ny tafi-panjakana. Hita ao anatiny ihany koa ny safidy ahafahana mijanona ho an'ireo izay maniry an'izay, tsy toy izay niseho tany Alep Atsinanana, izay nanesorana ireo sivily rehetra talohan'ny nahatongavan'ny tafi-panjakana.
Na izany aza, niteraka tahotra faobe tao am-bohitra ny tsy fahatokisana ireo rosiana mpiahy, izay hany mpiantoka ilay fifanarahana, ampian'ny fisian'ireo Shiita mitam-piadiana any amin'ireo vohitra manodidina (Zarzuriya, Hayek sy Mazraa). Betsaka ny honohono niely hoe misy milisy shiita avy amin'ny vohitr'i Mazraa (mifanila amin'i Al-Waer) niandry ny hanesorana ireo andiany farany amin'ny mpihoko mba hangalarana sy hanenjehana ireo sivily mijanona.
Vokany, zavatra roa matroka no miandry ireo vahoaka, na hafindra sy hofongorina, na hijanona anatin'ny tsy fahazoana antoka, safidy iray faran'izay sarotra tanterahana.
‘Tsy te-hamela ny tranoko, ny fananako sy ireo fahatsiarovako aho’
Soritsoritan'i Hayyan Al-Siufi, 30 taona, mpikatroka avy amin'ny fiarahamonina sivily, ho toy ny “taonan'ny fatiantoka” ireo taona dimy niainany ny fahirano.
Nosoritany ho an'ny SyriaUntold ireo fepetra henjana niainana ny daroka baomba, ny fahirano ary ny fanimbàna ireo fotodrafitrasa, niaiky fa nenina ho azy ny tsy nandeha nifindra monina dieny tany am-piandohan'ny ady mitam-piadiana tao Siria. “Tsy hitako hoe nitondra nankaiza izao izany rehetra izany” hoy izy, sanganehana. “Naninona no nitahiry faharetana? Raha toa ny hiafaràna ka ho afindra toerana tahaka izao sy handao ny tranonay ary ireo havan-tiana” ?
Iray ihany amin'ireo tanora an'aliny tao Al-Waer noterena hiditra ao amin'ny tafika na ho miaramila fiandry i Hayyan, ary tsy nandeha nankany ivelany tamin'ny nisafidianany hijanona tao amin'ny faritra nofehezin'ireo mpihoko nanomboka tamin'ny 2011. Ny fanantenan-dry zareo dia hoe indray andro any hitsahatra ny ady ary dia ho afaka amin'ny raharaha miaramila an-terisetra izy ireo na ny fandraisana azy ho miaramila fiandry.
Saingy niaraka tamin'ny ahalasa ho tena izy ilay fanesorana ny tao an-tanàna, ary ireo herinandro vitsy monja sisa tavela mba handrafetana ireo andiany, nandà ny hijanona izy ireo noho ilay tahotra tsy misy fiafaràny, ny fanerena hiditra ho ao anaty tafi-panjakana siriana.
Ankoatra izany, raha toa ireo lehilahy latsaky ny 40 taona tsy nisalasala mihitsy handeha ho any amin'ireo faritra ambany fifehezan'ny mpanohitra, sarotra kosa ny fanapahankevitra ho an'ny fianakaviandry zareo sy ny havany izay mifamahofaho be ny laharampahamehana, ny andraikitra, ny tahotra ary ny zavatra andrasana.
Tavela eo anelanelan'ny fifamatorany amin'ny fàka niaviany sy ireo zanany eo ampiaingàna, marobe ireo fianakaviana no nosamantsamahan'ny fandraisana fanapahankevitra, ary ny sasany nisintona ny fangatahan-dry zareo hisoratra anarana ho any amin'ny tany tsy fantatra dia namerina nametraka azy ireny im-betsaka.
“Nisoratra ho any Idlib izahay mba ho afaka hihazo haingana an'i Tiorkia. Avy eo hitanay fa tsy mora ny miditra an-tsokosoko ary mety ho sandaina lafo, noho izany dia nandray fanapahankevitra izahay hanova izany ho any Jarablus”, hoy i Umm Rami, nanamarina ny fahatongavany tao amin'ny iray amin'ireo toerana fisoratana anarana, niaraka taminà andiana mponina, na dia efa tapitra aza ny fotoana fisafidianana izay toerana hitodiana.
Tamin'izay nolazainy ho an'ny SyriaUntold, nivoaka teo fa mpiasam-panjakana izy, ary rangahy vadiny kosa efa dila ny taona tokony haha-miaramila fiandry azy. Nisafidy ny handeha anefa ry zareo na izany aza, niaraka tamin'ireo zanany telo, noho ny fiheverana ny amin'izy ireo.
“ 26 taona ilay zokiny indrindra, ary tadiavina hanao miaramila fiandry izy, 20 taona ilay faharoa ary tadiavina hanao ny raharaha miaramila tsy maintsy efaina izy, 15 taona ilay farany, iza midika fa efa akaiky koa ny taona hanaovany ny raharaha miaramila”.
Eo ampihazonana ny hatony amin'ny felantànany, toy ny mba hanamaivanàny ny horohorony, tamin'ny feo mikasaotsaoka no nanampiany hoe : “Tena mahatsiaro torotoro tanteraka aho. Tsy te-hamela ny tranoko, ny fananako, ny mpiray vodirindrina amiko, ny fahatsiarovako aho, etsy an-daniny koa tsy azoko avela amin'izao taona izao ireo zanako”.
Ao amin'ilay toerana fisoratana anarana ho any amin'ireo toerana voatondro (Idlib, Jarablus, faritra ambanivohitr'i Homs), mifanoro hevitra ny olona ary mifampizara torohay azony tamin'ireo izay efa nialoha làlana an-dry zareo nankany amin'ny iray tamin'ireo toeram-pitodiana ireo.
Misy filazàna mivantambantana matetika miverimberina entin'ireo olona marobe ka zary lasa maka endrika ‘mantras’ mivezivezy any amin'ny manodidina toy ny hoe zavatra voaporofo ara-tsiansa. “ Mora hofantrano hipetrahana ao Idlib”, “ny olana ao Idlib dia mampididoza ary toeran'ny daroka baomba”, “ireo misafidy an'i Idlib raha ny marina dia misafidy an'i Tiorkia miaraka amin'ireo mpampita olona”, “hosamborin'ny tafi-panjakana ireo rehetra izay misafidy ny hijanona ao amin'ilay faritra”, “Azo antoka ny ao Jarabulus, saingy sarotra ny mahita trano honenana”, “raha afaka natao ny niaina tanaty tranolay, dia ho azo atao araka izany ny mandeha any Jarablus” “Tsy ho ela ny faritra ambanivohitra any avaratra dia hizaka izay nanjo an'i Al-Waer”.
Mihataka amin'ireo andiam-behivavy miresaka i Umm Rami, namela ireo vehivavy hanohy ny adihevitra tsy nisy azy. Mila tsy hamindra ny tongony, eo ampihazonana ny ranomasony efa vonona ny hilatsaka avy amin'ny masony. “Tsy misy dikany izao rehetra izao”, hoy izy mantsy ny SyriaUntold. “Tototry ny antsipirihan-javatra izahay, ary dia variana mikaroka ny hoe toeram-pitodiana aiza no tsara indrindra, Idib ve sa Jarablus… fa tsy hitanay ny tena votoatin-javatra: mitovy ihany izany! Mandeha izahay !”